ခေတ်ပြိုင်ထောင့်ဆိုဖာမှာအရွယ်အစားနှင့်၎င်းတို့တွယ်ကပ်နေသည့်သက်တောင့်သက်သာရှိသောကြောင့်လူကြိုက်များသည်. သငျသညျနေတဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်နှင့်ထောင့်ဆိုဖာအကြားမှန်ကန်သောချိန်ခွင်လျှာကိုရှာဖွေတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုရှာနေလျှင်, ကျွန်ုပ်တို့၏ Baotian ပရိဘောဂများကိုစဉ်းစားပါ. ဤကျယ်ဝန်းသည့်ဆိုဖာသည်မိသားစုအားလုံးအတွက်လုံလောက်သောနေရာမရှိ၊. မီးခိုးရောင်ထည်ကူရှင်ချုပ်ခြင်းကဒီဇိုင်းအတွက်ဇိမ်ခံပစ္စည်းများပိုမိုထိတွေ့စေသည်. ၀ တ်စုံကိုမကြိုက်လျှင်ကတ္တီပါကဲ့သို့သောအခြားသူများစွာ ၀ ယ်နိုင်သည်။.
အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါ ၀ င်သည့်ဆိုဖာတွင်ဘယ်ဘက်ခြမ်းနှင့်လက်ယာဖက်ရှိဆိုဖာများပါ ၀ င်သည်. Baotian ခေတ်ပြိုင်ထောင့်ဆိုဖာသည်သင့်အားစာဖတ်ခြင်းထက်ထိုင်ခုံနှင့်သက်တောင့်သက်သာခံစားမှုကိုပေးသည်. ဒါဟာအစအများဆုံးလူပေါင်းကောင်းသောထိုင်ခုံအစီအစဉ်ပါပဲ, လူတိုင်းတစ် ဦး ချင်းစီကတခြား facing ထိုင်အဖြစ်ပါပဲ. ဒါဟာနေဆဲတူညီတဲ့လိမ္မာပါးနပ် built-in ကျားကန်ရှိပါတယ်, သင်လိုချင်သည့်အခါသင့်အားနောက်ကျောထောက်ခံမှုပေးသည် - သင်မကျင့်သောအခါကွာ tucks. Plus အားအတူတူပင်ထောင့်လက်နက်နှင့်ပိတ်ပင်ခြေထောက်လှည့်, နိဂုံးချုပ်အဖြစ်. ထိုတွင်ထိုင်သည့်အခါအမွေးကျားများသည်သင့်အားအပိုအထောက်အပံ့များပေးသည် (သင်မကျင့်သောအခါပျောက်ကွယ်သွားသည်). အမွေးအတောင်ထုပ်ပိုင်ဆိုင်မှုကြောင့်, ဒါကြောင့်သူတို့က plumper ဖြစ်ကြပြီးရေမြှုပ်ထုပ်ထက်ပိုရှည်သူတို့ရဲ့ပုံသဏ္keepာန်စောင့်ရှောက်လော့. အပြင်, အဆိုပါထောင့်လက်နက်နှင့်လှည့်ခြေထောက်စတိုင်တစ်ခုထိထက်ပိုထည့်ပါ. ၎င်းတွင်ရရှိနိုင်သည်2ထိုင်ခုံ3ထိုင်ခုံ. စစ်မှန်သောဇိမ်ခံကားဒီဇိုင်းဖြစ်သောထိုင်ခုံနှင့်နောက်ခံကူရှင်တွင်အမြှုပ်များဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသောအမွေးအတောင်များစွာပါရှိသည်.
အမျိုးအစား: Room ည့်ခန်းသုံးဆိုဖာပရိဘောဂ; ဟိုတယ် Suite; ဟိုတယ် lob ည့်ခန်း; အမွေးအတောင်-ဆိုဖာဆင်း,
ပစ္စည်း: သားရေ; အမွေးအတောင်; အထည်; ခရုမ်းခြေထောက်များ; သစ်သားအတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံ; ပျော့ပျောင်းသောအမြှုပ်
ထုတ်ကုန်အမည်: ရောင်းရန် Feather နှင့်ခေတ်ပြိုင်ထောင့်ဆိုဖာ
function ကို: Chaise နှင့်ပုဒ်မဆိုဖာ
အတိုင်းအတာ(စင်တီမီတာ): 326L ကို * 224W * 78H; စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစား
ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား(စင်တီမီတာ): 330L ကို * 229W * 83H